Dolores Redondo, akatanhamara mabhuku emunyori ane mukurumbira wechiSpanish. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Mabhuku, Literature, Nhema nhema
Dolores Redondo, akaburitsa mabhuku, iyo Baztán Trilogy - booket.com.
Dolores Redondo Meira munyori wechiSpanish akasarudzika mumhando yematsotsi. Akazvarwa muDonostia, Spain, muna 1969. Kunyangwe achinzwa kukwezverwa pabasa remunyori kubva paudiki, akafunga kudzidza Mutemo, kunyangwe asina kupedzisa degree rake, akapedza kudzidziswa kwake seMudzoreri paYunivhesiti Deusto.
Gare gare, akapinda munyika yekubika, kutanga semushandi uye pakupedzisira semuridzi weresitorendi., kudzamara afungira basa rake rekunyora. Akatanga semusiki wenyaya dzevana nenyaya. Mumatanho ekutanga aya haana kubudirira, aifanira kumirira kusvika 2009 kuti aone bhuku rake rekutanga rakaburitswa, Ropafadzo dzeMutumwa.
1 Svetukira kukuzivikanwa
2 Dolores Redondo akaburitsa mabhuku
2.1 Ropafadzo dzeMutumwa (2009)
2.1.2 Chimiro chinotonhorera
2.1.3 Basa rengirozi
2.2.1 Nhoroondo yakatsigirwa-zvakanaka
2.2.2 Tsanangudzo yave iri kiyi yekubudirira
2.2.3 Mutauro wakapusa uye unofadza
2.2.4 Nyaya inobata muverengi
2.3 Zvese izvi ini ndichakupa (2016)
2.3.1 Kurasikirwa kunotanga zvese
2.3.2 Vakanyatso kugona mavara uye kutendeuka kusingatarisirwe
Yakanyatso kufumurwa muna2013 nechikamu chekutanga cheiyo Baztán trilogy, Mutariri asingaoneki. Gore rimwe chetero kuenderera kwakatangwa Nhaka mumapfupa, uye muna 2014 kuvharwa kwesaga, Kupa dutu. Pakazara, akateedzana aya akapfuura mazana mana emazana emazana akatengeswa uye akaturikirwa mumitauro inodarika gumi nemashanu.
Muna 2016 akaburitsa Zvese izvi ndichakupa, izvo akapihwa Mubairo wePlaneta seyakanakisa spanish novel uye zvakare neBancarella Mubairo (2018). Kune rimwe divi, kodzero dze Baztán trilogy zvakawanikwa nemugadziri wechiGerman Peter Nadermann (anozivikanwa neiyo Millennium Saga) uye bhaisikopo Muchengeti asingaoneki Yakaburitswa mu2017, pasi pekutungamira kwaFernando González Molina.
Dolores Redondo akaburitsa mabhuku
Ropafadzo dzemutumwa (2009)
Iyi ndiyo nhoroondo yekutanga yakaburitswa naDolores Redondo. Mariri, akati wandei emitsara yake yakasarudzika semunyori wenhoroondo yematsotsi atoonekwa, aine musanganiswa wechokwadi wevanokudzwa, vanyoro uye vasina mhaka mavara, pakati penzvimbo ine rima, yakaoma uye mamiriro ekupererwa. Mutambo wakagashira wongororo dzakanaka, uye mazhinji akasimuka mushure mekuzivikanwa kwakawanikwa ne Muchengeti asingaoneki (2014).
The scheme of Ropafadzo dzemutumwa inoitika munzvimbo dzekuredza dzemahombekombe eSan Sebastián. Inotsanangura mamiriro ezvinhu akaiswa muhupenyu hwazvino hwaCeleste Martos, hwakatsanangurwa zvakafanana nezviitiko zvinotyisa zvakaitika mukati ma1970, sezvo protagonist yakamisikidzwa kubvira paine makore mashanu nekutsakatika kweshamwari yake yekutamba.
Muchidimbu rondedzero izere nemitsara mipfupi, munyori anoratidza kuti kudamburwa kwetete zvisungo zvehukama hwehucheche zvinoshanduka kuita dhiya refu kwenguva inopfuura makumi maviri emakore. Ipapo muverengi akafukidzwa mudenga-denga mamiriro echimiro chevanhu vasingakwanise kugamuchira kurasikirwa kwekunzwa.
Kuramba kunosvika kumiganhu isina hutano uye ine njodzi, kubata nenyaya dzekunamata, kusurukirwa, uye kuzviuraya. Kurwisana kwemukati kwaCeleste kunomuita kuti anzwe asingabatsiri pakati pekunze uye kuomarara kwenzvimbo dzakamupoteredza. Kune ese ayo Ropafadzo dzemutumwa Rakaonekwa sebhuku rinofungidzira uye rinofamba mune kumwe kuongorora kwakakosha.
Mukutsvaga kwako mhinduro, ngirozi dzinoonekwa seyako chete vabatsiri nekuti ivo vanozoita kuti iwe unzwisise kukosha kwemanzwiro ako uye hunhu hwake. Izvo zvisikwa zvekudenga zvinopesana negehena repasi rakasangana kusvika kumagumo, rizere neshanduko dzisingatarisirwe uye zvakazarurwa zvinoshamisa
Iyi nhevedzano yezvikamu zvitatu Yakagadzirwa ne Muchengeti asingaoneki, Nhaka mumapfupa y Kupa dutu. Rimwe nerimwe remabhuku rine hukama nenhevedzano yematsotsi akabatana akaitika muBaztán Valley. Iye protagonist ndiInspector Amaia Salazar, uyo anotora rakaoma basa rekuferefeta uye kujekesa chokwadi.
Mutsara naDolores Redondo - Estimd.bolgspot.com.
Kugadzira chirongwa ichi zviri pachena kuti Dolores Redondo akaita rakakura kwazvo uye rakadzama zvinyorwa. Chakavanzika chakazara munzvimbo dzacho, nehumhondi hwakakomberedza zvinhu zvemweya zvine chekuita nenhema nengano. Iye munyori haarambe achifa paropa iro rinomutsa mifananidzo isina kuchena muverengi, pamwe nekukasira kwekuda kuziva kuti "chii chiri kuitika pano?"
Tsanangudzo yave iri kiyi yekubudirira
Hokore inogadzirwa kuburikidza nerondedzero yakadzama (inenge didactic) yemafungiro ematsotsi pamwe nehurefu hwekuratidzira uye kutendeuka kusingatarisirwe. Redondo inopa inopesana nemamiriro ayo anogona kuve anovhiringidza (kushungurudza) kune vasingafungire vaverengi. Saizvozvowo, kuvakwa kwemavara ayo kwakanyatsotsanangurwa.
Mutauro wakapusa uye unofadza
Kune yakadaro nyaya yakaoma kunzwisisa zviri nyore kuverenga, zvakavanzika zvinoswededzwa pamwe nekushamisa kwehunyoro. Iye protagonist, Amaia Salazar, mukadzi anonzwisisa, punctilious, akatarisana nebasa rake uye (zviripachena) ane chipo chehungwaru hukuru. Nekudaro, kubatikana kwake nekugadzirisa mhosva kunomuita anoshaya manzwiro evanhu vaanosangana navo.
Nyaya inobata muverengi
Pakupera kwesaga hazvigoneke kuti usafarire Amaia. Uye zvakare, vaverengi vazhinji vanogona kuratidzwa mukusagadzikana kwemhuri yake, kunoonekwa muhukama hwake naamai vake nehanzvadzi. Aya marudzi ezvimiro anopa aya mabhuku kujeka uye kwechokwadi kwechokwadi. Uye zvakare, shamwari diki yaSalazar, Jonan Etxaide, akaenzana tsika uye anoshanda nesimba, asi zvakanyanya kunetsa.
Muverengi anofanirwa kugara akangwarira kune yega yega huwandu hweruzivo rwunoratidzwa mune trilogy yese kana ivo vasingade kushamisika uye / kana kugumburwa nemhedzisiro. Kwete pasina, kufarira kwakamutswa kuruzhinji kwakatungamira mukugadzirwa kweiyo firimu Muchengeti asingaoneki uye zvakagadzirirwa kupedzisa saga.
Zvese izvi ndichakupa (2016)
Pane ino chiitiko, Dolores Redondo inopa chinyorwa chematsotsi neyakaganhurirwa kumhanya uchienzaniswa neiyo Baztán trilogy. Nekudaro, iro basa rine aura yechakavanzika iyo inovimbisa yakasimba manzwiro uye kusava nechokwadi kusvika kumagumo, nekuti iwo maitiro akapoterera kesi yakatsanangurwa anonyengera chaizvo.
Kurasikirwa kunotanga zvese
Iyo rongero yakaiswa muRibeira Sacra, uko vlvaro anotambura nenjodzi inouraya. Manuel (murume wake) paanosvika kuGalicia kuzoziva mutumbi, anoona kuti kuferefetwa kwenyaya iyi kwakavharwa nekukurumidza. Pamusoro pezvo, mhuri ine simba uye yakapfuma yemushakabvu, iyo Muñiz de Ávila, ine nhoroondo yeimwe nyaya dzedzimwe dzinofungidzirwa kuti ndedzekufa, dzinofungira.
Vakanyatso kugona mavara uye kutendeuka kusingatarisirwe
Pamusoro pezvo, Nogueira (muchengeti wevashandi vepamudyandigere) naLucas (mupristi aiziva Álvaro kubva paudiki) vane fungidziro zhinji nezvekufa kwake; ivo vanofambidzana naManuel mukuvakazve kwehupenyu hwemurume wake hwakavanzika. Ndipo apo varume vatatu vasina kuoneka kubatana vanouya pamwechete kuzogadzirisa nyaya
Dolores Redondo achisaina bhuku reZororo rese ndichakupa.
Pakati penzvimbo izere netsika dzekuchengetedza, zviyeuchidzo zvinoratidzwa, nekuti muchirongwa chose hapana zviripo zvinoita. Kuti vawane enigmas, ivo protagonists vanomanikidzwa kushandisa chimwe chinhu kupfuura kufunga uye kufunga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Dolores Redondo: Anowanikwa Mabhuku
Mabhuku nemikombe akadaro
Dolores Redondo pasina mubvunzo ave mumwe wevandinonyanya kufarira vanyori !!
Pindura kumabhuku nemikombe